Nala Soo Xiriir - Gold Sanon International Co., Ltd.
Chief, dhoofinta Qaybta 1 (Asian suuqa iyo dalalka kale)
Chief, dhoofinta Section 2 (India iyo Bariga Dhexe Area)
Chief, dhoofinta Qaybta 3 (Russia, Kazakhstan, Uzbekistan)
Chief, dhoofinta Qaybta 4 (South Korea, Singapore, Australia)
Chief, dhoofinta Qaybta 5 (Ecuador iyo Vietnam)
Tani waa responsibale qoraxdu suuqa caalamiga ah, oo madax ka ah iibka, 5 sano in industry biibiile, adeegga 24 saacadood booqde kasta, macaamiisha, fidiya agabyo suuqa iyo Xog.
Waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray Tianjin. 8 sano ku dhacdaa in dhoofinta. Waan ku faraxsanahay inaan la macaamiisha xiriiraan. Ku raaxeyso in saaxiibkiisa leh macaamiisha iyo ka caawinta xalliyaan ay wax u baahan.
Waxaan ku dhashay tuulo yar oo ku taala waqooyiga dalka Shiinaha oo ka tirsan jaamacadda MINZU ee Beijing qalin. Waxaan ku noolaa iyo shaqeeyay Beijing ka hor inta ku dhaqaaqa in Tianjin si ay ugu biiraan SANON biibiile. Waxaan ku jiray iibka waayo saddexdii sano ee la soo dhaafay, oo jecel shaqo ee iibinta biibiile.
Waxaan ku dhashay Tianjin, ka qalin jabiyay Jaamacadda Yunnan iyo dib u Tianjin tegey biiro biibiile SANON ah. Waxaan in iibka muddo laba sano ah, waxaan jeclaan lahaa inaan si ay u xaliyaan dhibaatada macaamiisha ah ee iibsigu.
Waxaan ku dhashay Shijiazhuang City, Gobolka Hebei, oo ka qeyb galay college ee Baoding City. Waxaan ka bartay 2D ka dib markii saameyn iyo video edit. Oo shaqeeyay in industry steel muddo 3 sano ah. Aad ayaan ugu faraxsanahay in ay galaan qoyska of Sanon International ahay.
40crmo Daawaha Steel tuuboyinka , Daawaha tuuboyinka-qeybiye , P22 Daawaha Steel tuuboyinka ,